साउन ११, काठमाडौं । के तपाई विशुद्ध अर्गानिक तरकारीको खोजीमा हुनुहुन्छ ? अथवा कालीमाटीको तरकारीले हैरान हुनुहुन्छ ? यदि यस्तो हो भने काठमाडौंको कपनमा रहेको अर्गानिक फार्म हाउसमा जानुहोस् र विषादी रहित तरकारीको आनन्द लिनुहोस् ।
स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको फार्म हाउसमा काँक्रा ,कागती , बोडी ,रायो साग , चम्सुर , पालुंगो , सुप , पुदिना ,धनियाँ , टमाटर , सिमि , काउली लगायत अनार, भोगटे, केरा अम्बा, आरु जस्ता सबै फलफुल यहाँ पाउन सकिनेछ ।
१८ रोपनी क्षेत्रपÞmलमा फैलिएको अर्गानिक फार्म हाउसमा न कुनै मिसावट त न कुनै विषादी प्रयोग गरिएको छ, फार्म हाउसका संचालक पेम्बा शेर्पा भन्छन्, फार्म हाउसको लागि करिब ८ बर्ष अघि २५ लाख लगानी गरेको थिए । उनले भने, फार्म हाउसमा दिनहुँ रुपमा १० जना कार्यरत छन् । उनले फार्म हाउस काठमाडौँको सुकेधाराबाट डेढ किलो मिटरको दूरीमा रहेको बताए ।
त्यसै फार्म हाउस मात्र नभई शेर्पाले ‘एक्साइटिङ डे–ट्रिप’ नामको हाइकिङ पनि चलाएका छन् । यसमा सहभागी हुनेलाई पनि उनी बूढानीलकण्ठ, नागी गुम्बा, फुलारी गुम्बा, तारेभीर, कपनगुम्बा हुँदै आफ्नो फार्म हाउससम्म हाइकिङ गराउँछन् ।
त्यसैगरी सञ्चालकका अनुसार फार्म हाउसमा २५ जना जति बस्ने गरी मिलाएको छ र यिनीहरुले रमणीय स्थान घुम्दै फिर्दै, घरेलु उत्पादनको खान र खाजाको समेत व्यवस्था रहेको छ । अर्को सुविधा भनेको यहाँ टुड्म्बा पारखीहरूलाई लक्षित गर्दै खानपिन गर्न रुचाउनेका लागि बारीका डिलहरूमा छुट्टाछुट्टै स–साना घरसमेत बनाएका छन् । यिनमा सोल्टिनीको घर, याक्सा घर, दौंतरी घर, ठूल्दाइको घर , मचान नाच घर आदि छन् । यी घर हरुमा बसेर स्वच्छ , शितल हावा संगै मनमोहक हरियाली वातावरणलाई नियाल्न सकिन्छ ।
यो बालबालिका , युवायुवती, र वद्धवृद्धा सबैको लागि उपयुक्त स्थान छ । फार्म हाउसमा खाजा, खाना खाने लाई निः शुल्क घुम्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने छुट्टै आउने व्यक्तिहरुले भने रु १०० तिरेर फार्म हाउस को अवलोकन गर्न सक्छन् । सञ्चालक तथा पर्यटन व्यावसायी शेर्पाले नै नेपालको अर्गानिक एग्रो टुरिजम प्रवद्र्धनको अवधारणा (कनसेप्ट डेभलोपर) नेपालमै पहिलो पटक ल्याएको हो ।